ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အခမ်းအနားများ အတွေ့အကြုံ (ဆစ်ဒနီ) ~ Nge Naing
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အခမ်းအနားများ အတွေ့အကြုံ (ဆစ်ဒနီ)
Thursday, June 23, 2011 Nge Naing 17 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ဆစ်ဒနီမြို့မှာ နှစ်နေရာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားရယ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အဖွဲ့အစည်းစွဲ မထားဘဲ ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ တင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပမည့် အခမ်းအနားကိုပဲ တက်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ အခမ်းအနား နှစ်ခုစလုံးကို ကျွန်မတက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ (19/06/11) မြို့ထဲက4A Centre for Contemporary Asian Art မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားကို သြစကြေးလျားက ထင်ရှားတဲ့ အထင်ကရ အမျိုးသမီး လေးဦးက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ (21/06/11) နေ့က မြန်မာစားသောက်ဆိုင် ပုဂံစားသောက်ဆိုင်မှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားကိုကျတော့ Burma Campaign Australia က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြို့ထဲက အခမ်းအနားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အသိနည်းနေသေးသူ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် မြန်မာ့အရေးကို သတင်းအချက်အလက် စီမံဆောင်ရွက် ဖေါ်ပြပေးတဲ့ အခမ်းအနား ဖြစ်ပြီး ပါတီပွဲတခု အသွင်သဏ္ဍန်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Burma Campaign က ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ မိတ်ဆုံစားပွဲ သဏ္ဍန်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခမ်းအနား နှစ်ခုက ကျင်းပတဲ့ ပုံစံတခုနဲ့တခု လုံးဝ ကွဲပြားခြားသလို နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ ရှစ်လေးလုံး မျိုးဆက်တွေ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားတွေလို ဈေးရောင်းပွဲတွေနဲ့ တွဲလုပ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ လူကြီးတွေသက်သက် တက်ရောက်တဲ့အတွက် အရင်တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခမ်းအနားတွေနဲ့ မတူကွဲပြားခြားနားနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အခမ်းအနား တက်ရောက်သူတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ Activists မဟုတ်သူတွေကို အများဆုံးတွေ့ရပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အခမ်းအနားတွေမှာ တွေ့နေကျ Activists တွေကို သိပ်မတွေ့ရတာကို သတိထားမိပါတယ်။
19/06/11 မှာ သြစကြေးလျား အမျိုးသမီးတွေ ကျင်းပတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အခမ်းအနား
ဒီအခမ်းအနားကို သြစကြေးလျားက ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးလေးဦးဖြစ်တဲ့ Di Morrissey (ထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမတဦး), Therese Rein (လက်ရှိနိုင်ငံခြားရေး ဖြစ်သူ ယခင် သြစကြေးလျားဝန်ကြီးချုပ် Kevin Rudd ရဲ့ဇနီး), Lucy Turnbull AO (လက်ရှိ Shadow Minister Communication and Broadband ယခင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Malcolm Turnbull ရဲ့ ဇနီး) Ms. Janelle Saffin MP (လက်ရိအာဏာရ လေဘာပအတီက ဖက်ဒရယ် MP and Co-convenor of Australian Parliamentarians for Democracy in Burma) တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းနားကို ကျွန်မ သွားစဉ် ဆောင်းတွင်းကာလ သိပ်အေးပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဦးစီးတဲ့အခမ်းအနားဆိုတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် ဖြစ်အောင် မနေ့တနေ့ကမှ မြန်မာဆိုင်က သွားဝယ်လာတဲ့ မြန်မာရင်ဖုံးအင်္ကျီ အစိမ်းရောင်လေးကို ရှိပြီးသား ပိုးချိတ်ထမိန်လေးနဲ့ ၀တ်ပြီးအခမ်းအနားကို လာလိုက်တာ ထမိန်က တချိန်လုံး လျှောကျနေပြီး ပြင်ဝတ်နေရလို့ ၀တ်လာမိတာကို နောင်တရသွားတယ်။ အရင်က ချည်ချိတ်ထမိန်တွေကို ၀တ်ပြီးကျောင်းသွားဖူးတာ ဒီလောက်အထိ ဒုက္ခမရောက်ဘူး အခုကျတော့ လူကလည်း ကီလိုတိုးနေတော့ ထမိန်ဝတ်လို့ သိပ်မခိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာ ပိုးချိတ်ကို သွားဝတ်တော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ ဒါက အလှမက်လို့ ရတဲ့ဒုက္ခပါ။
အခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့နေ့က အမျိုးသားကလည်း အလုပ်သွားနေတော့ သားကိုပါ ခေါ်လာပြီး အခမ်းအနားကို ၀င်လို့ရရင် အခန်းထဲ ခေါ်သွားမယ် မရရင်လည်း မလှမ်းးမကမ်းမှာ ရှိတဲ့ အခမ်းအနားကျင်းပရာနေရာနဲ့ တလမ်းတည်း Hay Street ပေါ်က ကျွန်မတက်တဲ့ တက္ကသိုလ် UTS စာကြည့်တိုက်မှာ ကျွန်မရဲ့ ကျောင်းသားကဒ်ကို ပေးပြီး ခဏသွားထားမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး သားကို ခေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခမ်းအနားကို ရောက်တော့ အိမ်မှာ တယောက်တည်း ထားခဲ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ ခေါ်လာရတဲ့အကြောင်း Reception မှာရှင်းပြတော့ သားသားလည်း ၀င်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
Reception ကနေ လှေကားပေါ်တက်ပြီး အပေါ်ရောက်လို့ ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ အခမ်းအနားလို့သာ ပြောတယ် ဘာဆိုင်းဘုတ်မှ ရေးထားတာ မတွေ့၊ ထိုင်စရာ ကုလားထိုင်လည်း တလုံးမှအတွေ့ဘဲ အခန်းတခန်းလုံးမှာ အဖြူနဲ့ဗမာတွေ ရောနေတဲ့ လူတွေက မတ်တပ်ရပ်လျှက်နဲ့ နှစ်ယောက်တစု သုံးလေးယောက်တစုနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာအကကို ကပြမည့် ကလေးမလေးနဲ့ သူ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ဝင်းနိုင် မမီမီရှိန်တို့ မိသားစု၊ ဒေါက်တာမြင့်ချိုတို့ကို လှေကားက တက်တက်ချင်း အခန်းအ၀င်ဝမှာပဲ အရင်တွေ့ရပြီး လှမ်းနှုတ်ဆက်နေချိန်မှာ Burma Campaign က ဒေါက်တာကျော်မြင့်ကိုလည်း လူအုပ်ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရပြီး အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်ကြတယ်။
အခန်းရဲ့ အတွင်းဘက်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ၊ ကိတ်မုန့်တင်ထားတဲ့ စားပွဲခုံ၊ မိုက်နဲ့ မွေးနေ့ကဒ် တင်ထားတဲ့ စကားပြောမည့်နေရာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ရုပ်ပုံတွေနဲ့ စာသားတွေကို ဆလိုက်နဲ့ ထိုးပြထားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ကရင်ဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ကရင်အမျိုးသမီးလေးတွေက လင်ပန်းထဲမှာ အသားကင်၊ ဆူရှီ၊ Spring roll စတဲ့ အစားအစာတွေကို တလုပ်စာအရွယ် ပြင်ဆင်ထားတာတွေနဲ့ ဖန်ခွက်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ဖျော်ရည်မျိုးစုံကို ယူလာပြီး အခမ်းအနား မစတင်မီ မတ်တပ်ရပ်လျှက် စကားပြောနေသူတွေကို လိုက်ပြီး ဧည့်ခံကျွေးမွေးနေကြ ပါတယ်။ ကျွန်မတော့ တလုပ်စာအရွယ် ပုဇွန်သေးသေးလေး သုံးကောင်နဲ့ လိပ်ထားတဲ့ Spring roll လေး တလိပ်ပဲ ကောက်စားဖြစ်ပြီး တခြားဘာမှမစား ဘာမှမသောက်ခဲ့ပေမဲ့ သားကတော့ လာသမျှအစားအစာ အကုန်ယူစားနေတော့တယ်။
အတွင်းဘက်မှာ လူတွေအများကြီးနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေလို့ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ နာမည်ကိုပဲ မမှတ်မိပေမဲ့ လူကိုကျွန်မ ကောင်းကောင်းမှတ်မိသွားတယ်။ သူကလူအများကြီးနဲ့ စကားပြောနေတယ် ဆိုတော့ ကျွန်မ ရုတ်တရက် သွားနှုတ်မဆက်သေးဘဲ ဒေါက်တာမြင့်ချိုကိုမးကြည့်တော့ ABSDF ဗဟို ရှိရာ တောထဲလာဖူးသူဆိုတာ သေချာသွာုးတယ်။ ဒေါက်တာမြင့်ချိုက အဲဒါ မြန်မာ့အရေးကို အဓိက ဦးဆောင်ပြီး အထောက်ကူပြုနေတဲ့ လေဘာပါတီက ဖက်ဒရယ် အမတ် Jannelle လေ ဒီပွဲကိုလည်း သူပဲ ဦးဆောင်ခဲ့တာပေါ့လို့ ပြောပြတော့ ကျွန်မက သူ့နာမည်ကို ပြန်မှတ်မိသွားပါတယ်။ အဲဒီတုန်း Jannelle လာလည်တော့ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ သံလွင်မြင်ကမ်းဘက်ကို သွားလေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ ဗဟိုကနေ တနာရီခန့် လမ်းလျှောက်ရတဲ့ မယ်ရယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကို နှစ်ယောက်တည်း ခြေကျင်လျှောက်ပြီး လိုက်ပို့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက တောတွင်းမှာ ကြီးတဲ့ ကျွန်မထက်တောင် သူက ပိုပြီးလမ်းလျှောက် မြန်နေလို့ အံ့သြရတာကိုလည်း ပြန်သတိရသွားတယ်။ သူ့ကို မှတ်မိသွားပေမဲ့ သူ့မှာလည်း နှုတ်ဆက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ မနည်းမနောဆိုတော့ လူရှင်းတာကို စောင့်ရင်းနဲ့ အခမ်းအနားစတဲ့အထိ ကျွန်မ သွားမနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဘူး။
ဒီအခမ်းအနားကို သြစကြေးလျား အစိုးရဘက်ကရော အတိုက်ခံဘက်ကပါ နှစ်ဘက်စလုံးက ခေါင်းဆောင်တချို့ လာကြတယ်ဆိုတော့ ဒီလူတွေကို ကျွန်မထက် သားသားက ပိုသိနေပြီး မေမေ ဟိုတယောက်က ဘယ်သူမဟုတ်ဘူးလားနဲ့ တယောက်တွေ့တယောက် တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ လာလာပြီး မေးနေလို့ ကျွန်မကလည်း ၀န်ကြီးချုပ်၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ရှဲဒိုးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတွေကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ နာမည်နဲ့ လူကိုတွဲမသိတော့ တိတိကျကျ မဖြေဖြစ်ဘဲ " ဒီပွဲက သံတမန်အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတချို့လည်း လာကြတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်မှာပေါ့သား" လို့ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သားမေးတဲ့နာမည်တွေနဲ့ ဒေါက်တာ မြင့်ချိုကို ပြန်မေးကြည့်တော့ သားပြောတာ ဟုတ်နေတယ်။ အဲဒီနေ့က သူ တီဗွီထဲမှာ တွေ့နေကျ အတိုက်ခံပါတီကရော အာဏာရပါတီကဘက်ကပါ ခေါင်းဆောင်တချို့ကို အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင် တွေ့ရလို့ဆိုပြီး သားသားက တော်တော်လေး အံ့သြနေတယ်။
အခမ်းအနား စတင်တော့ အခမ်းအနားအစီစဉ်တွေကို ကြေညာတဲ့ အခမ်းအနားမှူးက အမျိုးသားတဦးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြီး ဒီအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆက်အနည်းငယ်ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အမှတ်အသားတချို့အကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြီးတာနဲ့ ဒေါက်တာဂျိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံက မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာတခု ဖြစ်တဲ့ လက်ဘက်သုပ်အကြောင်းကို နိုင်ငံခြားသားတွေသိအောင် မိတ်ဆက်ပေးပြီး ခင်းကျင်းပြသကာ အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ရှင်းပြနေစဉ်မှာလည်း ဒုံးယိမ်းအဖွဲ့က ကရင်အမျိုးသမီးလေးတွေက သုပ်ထားပြီးသား လက်ဘက်သုပ်တွေကို တခါသုံး ဟင်းခပ်ဇွန်းအရွယ် ကော်ဇွန်းတွေနဲ့ လင်ပန်းထဲမှာ ထည့်လာပြီး လိုက်ဝေပေးပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်ကို ပြသပြီးတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ယဉ်ကျေးမှုအကတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာရိုးရာ မင်းသမီးအကနဲ့ ကရင်ဒုံးယိမ်းအကတို့နဲ့ ဖျော်ဖြေပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေး အစီစဉ်ပြီးမှ ဒီအခမ်းအနားကို ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးဦးက တယောက်ပြီးတယောက် စကားပြောကြပါတယ်။
သူတို့ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှုကို ချီးကျူးဖေါ်ထုတ်ကြပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၂၃ နှစ်တာ တိုက်ပွဲဝင်သမိုင်းကြောင်းနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို သြစကြေးလျား လူ့အဖွဲ့အစည်းက သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ဦးစားပေးပြောသွားတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ သိပြီးသားတွေပဲ များပါတယ်။ အာဏာရှင်တို့ရဲ့ မတရားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အာဏာရှင်တို့ရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလည်း သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု ဘာမှမရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီး ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ရောက်တဲ့အထိတောင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေက ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိနေသေးကြောင်း ဒီနေ့ ၆၆ နှစ် ပြည့်သွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ ၂၃ နှစ်ကာလမှာ အချိန်ကာလအများစုကို အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့နေခဲ့ရပေမဲ့ အားမလျှော့ဘဲ ဆက်လက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး ဆိုတာလုံးဝ မဖြစ်စေရဘဲ မြန်မာ့အရေးကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့လိုကြောင်း စသည်တို့ကို ပြောကြားသွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးပိတ် Speech ကို Jenelle က ပြောပြီးတာနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းကြတယ်။ မွေးနေ့ကိတ်ခွဲပြီးတတာနဲ့ မွေးနေ့ကဒ်ထဲမှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းကို ရေးပေးကြပါတယ်။ ကျွန်မအရှေ့က ရေးပေးတဲ့သူတွ အားလုံးက အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ရေးပေးကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်မလည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းကို ဗမာလိုနဲ့ စာလုံးနည်းနည်းပေးကြီးပြီး များများရေးရင် တခြားသူတွေ ရေးဖို့ နေရာမကျန်ဖြစ်မှာစိုးတာနဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ပဲ လိုရင်းကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ သားသားရေးတဲ့အလှည့်မှာတော့ အကြာကြီးဖြစ်နေလို့ နောက်မှာ ရေးဖို့တန်းစီနေတဲ့ လူတွေကလည်း အများကြီးနဲ့ အားနာစရာကြီး Happy Birthday တလုံးနဲ့ Mg Toee Nanda တလုံး ရေးတာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ကြာနေရလဲ ဆိုပြီး သွားကြည့်တော့ သူက သူ့အသက်က ၁၁ ရှိကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ History Speech မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကို ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ ရေးထားတယ်။ အမှန်က သူက ကျောင်းမှာ လုပ်ရတဲ့ Oral Presentation အကြောင်းကို ပြောတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အဲလို မဖေါ်ပြထားတော့ သူရေးလိုက်ပုံက မသိရင် ဒီအခမ်းအနားမှာပဲ သူက speaker တယောက်လိုလို ထင်သွားနိုင်တယ်။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေ ရေးနေချိန်မှာတော့ ပြန်တဲ့သူကပြန်နဲ့ လူနည်းနည်း ပါလာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအချိန်ကျမှပဲ ကျွန်မက Jannelle ကို သွားနှုတ်ဆက်တယ်။ ကျွန်မကိုမှတ်မိလား မေးကြည့်တော့ မျက်နှာကိုတော့ ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်မှာဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေတယ် ပြောလို့ တွေ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃-၁၄ နှစ်ခန့်ကတောင် ဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့၊ ၉၇ ခုနှစ် ကုန်ခါနီးလောက်က ABSDF ဗဟိုကို လာလည်တုန်းကလို့ ပြောလိုက်တော့ သြော် မှတ်မိပြီ မှတ်မိပြီ မဲစရီးယန်းနားက စခန်းမဟုတ်လား ဒုက္ခသည်စခန်းကို လမ်းလျှောက်သွားတာ ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဆိုပြီး ပြောလို့ ကျွန်မလည်း တော်တော်လေး ၀မ်းသာသွားတယ်။ နင့်နာမည်က ဆိုပြီး ကျွန်မရင်ဘတ်က နာမည်ကဒ်ကို သူကဖတ်ကြည့်ကာ နာမည်ကိုခေါ်ပြီး နင်က မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ အနောက်တိုင်းကုတ်ဝတ်ထားတယ်လို့ ကျွန်မ၀တ်ထားတဲ့ အနွေးထည်ကို ရည်ညွန်းပြီး ပြောတယ်။ ပြီးတာ့ကျွန်မကို ဒီမှာတွေ့ရတာ ၀မ်းသာကြောင်းနှင့် သူက အခုထိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အဓိကပံ့ပိုးနေတဲ့ MP တယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဒေါက်တာမြင့်ချို ပြောပြလို့ သိပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ရော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို တောက်လျှောက် ထောက်ခံ အားပေး ပံ့ပိုးနေတဲ့အတွက်ပါ အထူပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကာ နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာလိုက်တယ်။ မပြန်ခင် သားသားက အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားက အပြန်မှာတော့ သားက ကျွန်မကို မေမေ အရင်က ဒီအခမ်းအနားတွေ တက်ဖူးလား ဘာအကြောင်းတွေ ပြောကြလဲ စသည်ဖြင့် မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေလိုက်ရတာ မနည်းမနောပဲ။ ကျွန်မတို့အခမ်းအနားပြီးလို့ Paddy Market အပေါ်က Market City Shopping Center မှာ ဆောင်းတွင်းဝတ် ဘောင်းဘီတထည်ဝယ်ကာ ခဏခဏ ပြင်ဝတ်နေရတဲ့ ပိုးချိတ်ထမိန်နဲ့ Change Room မှာ ၀င်လဲပြီးတာနဲ့ Darling Harbour ဘက်ကို လမ်းလျှောက်လာပြီး သားအဖေ အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကို လာစောင့်ပြီး သူ့အဖေကားနဲ့ အိမ်ပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ အခမ်းအနားက ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ (ဒီပို့စ်အတွက် လူနာမည်တွေနဲ့ တာဝန် အတိအကျနဲ့ ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်ကို ပို့လာပေးတဲ့ ဒေါက်တာမြင့်ချိုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
Ms. Janelle Saffin MP (Federal Labor MP and Co-convenor of Australian Parliamentarians for Democracy in Burma).
အခမ်းအနားမှူးမှ အစီစဉ်များကို ကြေညာနေစဉ်
အခမ်းအနားမှာ ကရင်ဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ဒုံးယိမ်းအဖွဲ့က စားစရာများကို လင်ပမ်းနဲ့ ထည့်ပြီး လိုက်ဧည့်ခံတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အစားအသာက်များ လိုက်ဝေငနေသည့် ဒုံးယိမ်းအဖွဲ့မှ ကရင်အမျိုးသမီးလေး နှစ်ဦး
ဒေါက်တာ Joe ဇနီးမောင်နှံမှ လက်ဘက်သုတ်အကြောင်းကို ခင်းကျင်းပြသပြီး အသုံးပြုပုံ စားသောက်ပုံကို ရှင်းလင်းပြနေစဉ်
ဆစ်ဒနီမြန်မာ မိန်းကလေးတဦးမှ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအကဖြင့် ကပြဖျော်ခြေနေစဉ်
Co-organisers of this event were Di Morrissey (one of Australia's most popular female novelists),
Therese Rein (wife of former Australian Prime Minister and current Foreign Minister Kevin Rudd) စကားပြောနေစဉ်
Lucy Turnbull AO (wife of former Opposition Leader and current Shadow Minister for Communication and Broadband Malcolm Turnbull)
အခမ်းအနားကို ကျင်းပသည့်အမျိုးသမီးလေးဦးနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးကို ကိတ်မုန့်ခွဲခါနီးတွေ့ရစဉ်
Happy Birthday သီချင်းသီဆိုပြီး တက်ရောက်သူ အားလုံးကို Miss Janelle မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားစဉ်
မွေးနေ့ကဒ်မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ရေးထိုးနေကြစဉ်
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ဆုတောင်းနေရင် မွေးနေ့ကဒ်မှာ နောက်လူတွေဆုတောင်းဖို့ နေရာ မကျန်မှာစိုးလို့ မွေးနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ပဲ မြန်မာလိုနဲ့ ရေးပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်တဲ့ တဦးတည်းသောကလေး ဖြစ်သူ မောင်တိုးနန္ဒက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းကို ရေးနေစဉ်
Ms. Janelle Saffin နဲ့ အမှတ်တရ
Burma Campaign Australia က ပုဂံစားသောက်ဆိုင်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အခမ်းအနား
ဒီအခမ်းအနားကတော့ အခမ်းအနားတခုပုံစံတခုထက် မိတ်ဆုံစားပွဲပုံစံနဲ့ ပိုဆင်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဒီအခမ်းအနားကို ကျွန်မ တက်ဖို့အစီစဉ် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉ ရက်နေ့မှာ လုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာ ဒေါက်တာကျော်မြင့်နဲ့ ဒေါက်တာ မြင့်ချိုတို့ကို တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကျင်းပတဲ့ပွဲကိုတော့ သွားအားပေးပြီး ကိုယ့်လူတွေ လုပ်တဲ့ပွဲကို မသွားရင် ကောင်းပါ့မလား ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံလို့ သွားတက်လိုက်ရတဲ့ပွဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအခမ်းအနားကမှ ကျွန်မအတွက် လာဘ်ကီးကောင်းတဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အခမ်းအနားကို သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လက်မှတ်အတွက် Book လုပ်တုန်းက လက်မှတ်ဖိုး ငါးဆယ်ဆိုတာ သိထားရာကနေ အခမ်းအနားရောက်တော့ လေးဆယ်ပဲ ဖြစ်နေတာကို သိရတော့ ဒါပထမလာဘ်ကီး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တခုက အဲဒီနေ့မှာ အမျိုးသားက အလုပ်ချိန်နဲ့ တိုက်နေတယ် ထင်နေတာ အလုပ်မရှိတဲ့နေ့နဲ့ ကြုံနေလို့ အခမ်းအနားကို ရထားနဲ့ သွားစရာမလိုဘဲ အမျိုးသားလိုက်ပို့လို့ ကားနဲ့သွားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်မက ဒီအခမ်းအနားမှာ လာတ်ကီးကောင်းနေတယ်ဆိုတာကို သတိမထားမိသေးဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လာတ်ကီးကောင်းမှန်း အခမ်းအနားပြီးခါနီးမှ တကယ်သိရပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားမှာလည်း အခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့အဖွဲ့ Burma Campaign Australia က ဗမာဆိုလို့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဒေါက်တာကျော်မြင့်နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမြင့်ချိုတို့ နှစ်ယောက်ကိုပဲ တွေ့ပြီး ကျန်တဲ့ ဧည့်ခံကြိုဆိုပြီး လက်မှတ်တွေ လက်ခံသူ၊ အစီစဉ်ကြေညာသူ၊ Burma Campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးကို လိုက်ဝေပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်မလားနဲ့လိုက်စည်းရုံးနေသူ၊ Burma Campaign ရန်ပုံငွေအတွက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ စာအုပ်နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ငြာပြီး ရောင်းချနေသူ၊ မဲဖေါက်ဖို့ Ruffle ticket တွေလိုက်ရောင်းနေသူတွေက သြစကြေးလျားလူမျိုးတွေပဲ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အခမ်းအနား တက်သူအများစုကလည်း ကျွန်မ ခါတိုင်းတွေ့နေကျ အသိတွေကို သိပ်မတွေ့ရဘဲ မတွေ့ဖူးတဲ့ မျက်နှာစိမ်းတွေက သိတဲ့သူထက် ပိုများနေတယ်။ အသိတွေအထဲမှာတော့ အဘဦးရဲခေါင် (မြ၀တီရဲခေါင်) တယောက်ကို တွေ့လိုက်ရလို့ ဒီလောက်အေးတဲ့ ရာသီမှာ ညဘက်ကျင်းပတဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို တကူးတက လာတက်တာကို ကြည့်ပြီး အဘရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားမိတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကာလမှာ စားစရာတွေ လာချပေးတာကို စားရင်းနဲ့ တင်ဆက်တဲ့ အစီစဉ်တွေကို ကြည့်လိုက် သီချင်းသီဆိုတာကို နားထောင်လိုက်နဲ့ပဲ လုပ်သွားပါတယ်။
အခမ်းအနား အစီစဉ်ကို ကြေညာပြီးမှာ ပထမဦးစွာ ဆစ်ဒနီမြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံက ဦးပန်တျာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ချီးမွမ်းစကား ပြောဆိုပြီး နဂါးနီသီချင်း သံစဉ်ကို ယူပြီး စပ်ဆိုထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အာဏာရှင်ကို စုပေါင်းတော်လှန်ကာ အောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အတွက် သူကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းကို သီဆိုပြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အခမ်းအနားတက်တဲ့သူတွေလည်း စားရင်းသောက်ရင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ပဲ နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မထိုင်လိုက်တဲ့ ထိုင်ခုံက ၀င်ဖို့ထွက်ဖို့ သိပ်မလွတ်လပ်တော့ တခြားအခမ်းအနားတွေလို ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေဘဲ အခမ်းအနား အစပိုင်းမှာ ထိုင်ရာကပဲ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူရပါတယ်။
ဦးပန်တျာ တင်ဆက်မှု ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေးစားအားကျဖွယ်ရာတွေကို ပြောကြားပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ အဆိုတော် ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်က အခမ်းအနားပြီးတဲ့အထိ တောက်လျှောက် သီချင်းတွေ တပုဒ်ပြီးတပုဒ် ဂီတာတီးပြီး သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေသလို အဆိုရောအတီးပါ ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်ကလူတွေလဲလို့ ဘေးနားက အစ်မတယောက်ကို မေးကြည့်လို့ ကိုအံ့ကြီးရဲ့ တူတော်တွေဆိုတာ သိရတယ်။ မျိုးဆက်မတူလို့ သီချင်းသံစဉ် တီးလုံးတွေ အသုံးပြုတဲ့ Musical instrument တွေ မတူကြပေမဲ့ အနုပညာအမွေအနစ်တွေကတော့ စီးဆင်းလျှက် ရှိတာကိုတွေးပြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အခမ်းအနားလာတက်တဲ့ အထဲက အန်တီတယောက်က ကိုအံ့ကြီးသီချင်း တပုဒ်လောက် ဆိုပြပါလားဆိုတော့ သံစဉ်တွေကိုပဲ မှတ်မိပြီး သီချင်းစာသားတွေကို မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ရွှေဘိုသနပ်ခါးတုံးသီချင်းကို မှတ်မိသလောက် တ၀က်တပြက်နဲ့ ဆိုပြတာကို အမှတ်တရအဖြစ် ကျွန်မ ဗွီဒီယိုရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနား ပြီးခါနီးမှာတော့ ကိတ်မုန့်ခွဲပြီးတာနဲ့ ကိတ်မုန့်ဝေတဲ့အချိန်မှာ ညဘက် အချိုမစားတတ်တဲ့ ကျွန်မက ဒီညကတော့ ညစာလည်း စားဖြစ်သွားသလို ချော့ကလက်ကိတ်ကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အမှတ်တရ စားဖြစ်သွားပါတယ်။ အခမ်းအနားရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ Ruffle ticket တွေကို မဲဖေါက်ဖို့အတွက် Burma Campaign ဥက္ကဌ ဒေါက်တာကျော်မြင့်က မဲနိုက်ပြီး အဖွဲ့ရဲ့ Coordinator Zatty က ပေါက်မဲကို ကြေညာပါတယ်။ ပထမဆုက King Cross မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်မှာ စားဖို့ $110 တန် စားသောက်ဆိုင် ဘောက်ချာတခု၊ ဒုတိယဆုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ပေးပြီး တတိယဆုကိုတော့ ဘာပေးလဲဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒီအထဲမှာ ကံထူးသူ ပထမဆု ရသူက ကျွန်မဖြစ်နေလို့ တကယ်ပဲ အံ့သြသွားတယ်။
ကျွန်မက ဘယ်အရာမဆို ဘယ်တော့မှ အလကားမရတတ်သူ၊ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်လုပ်ပြီးမှပဲ ရတတ်သူ ဖြစ်ပြီး မဲပေါက်တာ ထီပေါက်တာလို အလကားရတယ်ဆိုတာမျိုး ကျွန်မဘ၀မှာ သိပ်ကြုံကြိုက်ခဲလှတယ်။ ငယ်ငယ်က ခုနှစ်တန်းနှစ်တုန်းက ကျောင်းမှာ သင်္ချာစာအုပ် တအုပ်ပဲ လိုနေလို့ ဆရာက မဲဆွဲခိုင်းတာ တခုတည်းသော မပေါက်မဲက ကျွန်မမှာ လာကျခဲ့တာကို ကျွန်မ အခုထိ အမြဲမှတ်မိနေပါတယ်။ ဒီလို မဲဖေါက်တာကို တခါမှ ရတတ်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့ ကျွန်မမှာ ပထမဆုမဲပေါက်တယ်ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မကံကောင်းနေတဲ့အချိန်လို့ပဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ကျွန်မမွေးနေ့တုန်းက ဘလော့ဂ်နဲ့ Facebook မှာ လာပြီးဆုတောင်းပေးသွားသူတွေရဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် ကျွန်မကုသိုလ်ကံတွေ တက်လာတာလို့ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုတောင် ကျွန်မက စားသောက်ဆိုင်မှာ ဘောက်ချာက ဘာလုပ်လို့ရမလဲ စာအုပ်ကမှ ဖတ်လို့ရသေးတယ်ဆိုပြီး ဒုတိယရတဲ့ အစ်မနဲ့ လဲဖို့လုပ်နေလို့ ဘေးနားက အစ်မတွေက စာအုပ်က လိုချင်ရင် ၀ယ်လိုက်လိုက်လို့ရတယ် အစိတ်ပဲပေးရတယ် စားသောက်ဆိုင်လက်မှတ်က မိတ်ဆွေမိသားစုတစုခေါ်ပြီး ကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်လို့ ပြောသလို ဒေါက်တာကျော်မြင့်ကလည်း စာအုပ်သူ့မှာရှိတယ် သူပေးမယ်ဆိုလို့ မလဲဖြစ်ဘဲ ဘောက်ချာကိုပဲ ယူလာလိုက်တယ်။ အခမ်းအနားက ကိုးနာရီခွဲမှာ ပြီးမယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုးနာရီမှာပဲ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး အဘဦးရဲခေါင်ကို လာကြိုတဲ့ သူ့သား ကိုဝေလင်းကားနဲ့ ပြန်လာလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အနှစ်တရာတိုင်အောင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရပါစေ
Burma Campaign မှ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့် ရန်ပုံငွေအဖြစ် ရောင်းချနေသည့် ပစ္စည်းများကိုအဖွဲ့ရဲ့ Coordinator က ကြော်ငြာနေစဉ်
ဆစ်ဒနီမြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံမှ ဦးပန်တျာက သူတင်ဆက်မည့် အစီစဉ်များကို ပြောကြားနေစဉ်
အဆိုတော် ကိုအံ့ကြီးရဲ့ တူတော်သူတဦးမှ တေးဂီတဖြင့် ဖျော်ဖြေနေစဉ်
အဆိုတော် ကိုအံ့ကြီးရဲ့ တူတော်သူနှစ်ဦးမှ တေးဂီတဖြင့် ဖျော်ဖြေနေစဉ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်သည့် အားကျအတုယူစရာများကို အမျိုးသမီးတဦးမှ ပြောကြားနေစဉ်
Burma Campaign Australia မှာ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာကျော်မြင့်နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမြင့်ချို
အခမ်းအနားတက်ရောက်သူထဲမှာ အဘဦးရဲခေါင်ကိုလည်း ပါပါတယ်
ကိတ်မုန့်မကြိုက်တဲ့အပြင် ညဘက်မုန့်အချိုမစားတတ်ပေမဲ့ ဒီတခါတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် စားလိုက်ပါတယ်
Ruffle ticket ပေါက်မဲ မဲနှုက်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်
Free Burma သီချင်းဗွီဒီယို
Free Burma သီချင်း ဗွီဒီယို
Posted in: ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ,ဓါတ်ပုံ,သတင်း,သားသား,ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
June 23, 2011 at 4:06 AM Reply
June 23, 2011 at 4:08 AM Reply
နောက်ထပ် ကျန်တဲ.လူတွေရဲ.မွေးနေ.တွေကျရင်လည်း ပိုစ်.တွေတင်ပေးပါအုံး
ပထွေး ကင်အီဆွန်း မွေးနေ့ ကို ဖေါ်ပြပေးပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကို သန်းရွှေ၊ သိန်းစိန်တို့ က တမင်မေ့ထားတာပါ (၁) says:
June 23, 2011 at 8:50 AM Reply
ပထွေး ကင်အီဆွန်း မွေးနေ့ ကို ဖေါ်ပြပေးပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကို သန်းရွှေ၊ သိန်းစိန်တို့ က တမင်မေ့ထားတာပါ (၁)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများတင်မက ကမ္ဘာ့ပြည်သူပြည်သားများကပါ ချစ်ခင်လေးစားမြတ်နိုးရသူ ဖြစ်တယ်။
အာဏာရူး သန်းရွှေတို့ကြံ့ ဖွတ် သိန်းစိန်တို့ ကတော့ မြန်မာပြည်သူလူထု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့(၆၆) နှစ်မွေးနေ့ အကြောင်းကို ပါးစပ်ကတောင် မဟရဲကြဖူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပြောပါနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့မွေးနေ့ တို့အာဇာနည်နေ့ တို့ တောင်မှ တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးဆိုတာကို တမင်မေ့ထားပြီး ကျေးဇူးကန်းပြီး အရိုအသေ အလေးပြုဖို့ သန်းရွှေကအစ အခု ဒူးမနာသား သိန်းစိန်တို့ အထိ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မလုပ်ကြဖူး။
အာဏာရူး သန်းရွှေတို့ကြံ့ ဖွတ် သိန်းစိန်တို့ ရဲ့မုသားစကားလုံးများနဲ့ စီကုံထားတဲ့ မိုးလုံးပြည့်မုသားဝါဒ ဟာသစာစောင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံသတင်းစာတို့မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့(၆၆) နှစ်မြောက် သတင်းလေးတောင် မဖေါ်ရဲကြဖူး။
ဒါပေမယ့် အဖေကျော်ပြီး ပထွေး တမ်းတနေတဲ့ သန်းရွှေတို့သိန်းစိန်တို့ က သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သမတဟောင်း ကင်အီဆွန်းရဲ့(၉၇) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတုန်းက ရန်ကုန် အင်လျားလိတ်ဟော်တယ်မှာ ကျင်းပတာကိုတော့ သတင်းစာတွေထဲမှာ ဝေေ၀ဆာဆာဖေါ်ပြပေးကြခဲ့ရဲ့ ဗျာ။ အော် - ဒီလိုလူတွေကို ပုဆိန်းရိုးတွေ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေလို့မပြောသင့်ဖူးလားမေးရင် မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ပြောသင့်ပါတယ်လို့ထောက်ခံလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။
ပထွေး ကင်အီဆွန်း မွေးနေ့ ကို ဖေါ်ပြပေးပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကို သန်းရွှေ၊ သိန်းစိန်တို့ က တမင်မေ့ထားတာပါ (၂) says:
ပထွေး ကင်အီဆွန်း မွေးနေ့ ကို ဖေါ်ပြပေးပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကို သန်းရွှေ၊ သိန်းစိန်တို့ က တမင်မေ့ထားတာပါ (၂)
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး လွတ်လပ်ရေးကျေးဇူးရှင်ကြီး တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး၊ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုနဲ့ တစ်ကွ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ပြည်သူတွေက အသိအမှတ်ပြု လေးစားကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ဂုဏ်ရောင်တောက်ပြောင်စေတဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ဦးရဲ့မွေးနေ့ အကြောင်းကို မပြောရဲ မဖေါ်ရရဲတာကတော့ တိုင်းပြည်အကျိုး လူမျိုးအကျိုးကို ရှေ့ ရှူ မရှုဆိုတာ အာဏာရူး သန်းရွှေ သိန်းစိန်တို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိပ်ပြာမသန့် လို့ ဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုဘဲ အာဏာရူး သန်းရွှေတို့ကြံ့ ဖွတ် သိန်းစိန်တို့အာဏာရှင် တရုတ်အစိုးရတို့မပြောရဲပါစေ မဖေါ်ပြရဲပါစေ မနေ့ က ကျင်းပတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့(၆၆) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ တင်မက ပြီးခဲ့တဲ့မွေးနေ့ တိုင်း နောင်လာမယ့် မွေးနေ့ တိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ် တန်ဖိုးထားလေးစားကြတယ်ဆိုတာ ပြည်တွင်းပြည်ပတစ်လျှောက် ပြောဆိုကြတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတွေ တခမ်းတနားကျင်းပကြတဲ့ မွေးနေ့ ပွဲတွေကို ကြည့်ရင် မြင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေတင်မကဖူး ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်က နိုင်ငံတကာအသီးသီး အစိုးရတွေ ပြည်သူတွေ ပေးပို့ ပြောကြကြတဲ့ မွေးနေ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကို ကြည့်ရင်လည်း အထူးပြောနေစရာမလိုပါဖူး။
အာဏာရှင်နေ၀င်းက ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသန့် ကို အလေးမထား အရိုအသေမဲ့ပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံခဲ့သလိုဘဲ၊ အခု အာဏာရှင်နေ၀င်းရဲ့ဒူးမနာသားများဖြစ်ကြတဲ့ သန်းရွှေ သိန်းစိန်တို့ ကလည်း ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလေးမထားရဲတဲ့ ချိတ်ထမိန်ဝတ်တွေ ဖြစ်နေကြကြောင်းပါဗျာ။
June 23, 2011 at 1:30 PM Reply
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအကတွေ အစားအစာတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတာကို ကျွန်စိတ်ဆိုရင် သူများယဉ်ကျေးမှုကို ခိုးချတာကို သခင်စိတ်လို့ ဆိုလိုချင်ပုံရတယ်။ အခမ်းအနားနှစ်ခုမှာ တခုက နိုင်ငံခြားသားလုပ်တာလို့ ရေးထားတာ ပို့စ်ကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။ ပို့စ်ကို မဖတ်ပဲနဲ့ ပေါက်ကရ ရေးချင်တာ လာရေးရင် နောက်ဖေါ်ပြပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
-မောင်ဆိုတဲ့တယောက် တခြားသူမွေးနေ့ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တခြားသူမဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် သာမကဘူး ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် စာရင်းထဲမှာပါ ပါတယ်။ သားတို့ကျောင်းမှာ Assignment ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှာကြည့်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိပ်ဆုံးမှာ ပါလာလို့ အတန်းသားတွေကြားမှာ သားက တော်တော်လေး ဂုဏ်ယူခဲ့ရတယ်။ ဒီလို ဂုဏ်ယူစရာ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မင်းတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ အာဏာရှင်တွေ ထဲမှာရှိဖူးလား ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပါ။ ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ကို တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာတွေရော နိုင်ငံခြားသားတွေပါ ကျင်းပကြတယ်။ အခု ဆစ်ဒနီမှာ နိုင်ငံခြားသား ကျင်းပတဲ့ ပွဲက အတိုက်ခံပါတီကရော အာဏာရပါတီကပါ အပြင်က စီးပွားရေးသမား စာရေးဆရာ အနုပညာရှင် စတဲ့ နောက်ခံမတူတဲ့အမျိုးသမီးလေးယောက်က စုစုစည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ကျင်းပတာ။ ပွဲကိုလာတဲ့သူတွေကလည်း အတိုက်ခံဘက်ကရော အစိုးရဘက်ကပါ ရိုးရိုးပါတီစွဲမရှိသူတွေပါပါတယ်။ အဲလိုမျိုး မင်းတို့အာဏာရှင်ထဲက လူတွေအတွက် ဘယ်သူလုပ်ဖူးလဲ စဉ်းစားပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ အမှတ်အသား ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကို သူများမွေးနေ့လို့ မပြောမိစေနဲ့။
ကမ္ဘာ့ တတိယအဆိုးဆုံး အာဏာရှင် သန်းရွှေ (၁) says:
ကမ္ဘာ့ တတိယအဆိုးဆုံး အာဏာရှင် သန်းရွှေ (၁)
ကင်ဂျုံအိ က ပထမ၊ သန်းရွှေ က တတိယ (၁)
ကမ္ဘာ့ တတိယအဆိုးဆုံး အာဏာရှင် သန်းရွှေ (၂) says:
June 23, 2011 at 9:30 PM Reply
ကမ္ဘာ့ တတိယအဆိုးဆုံး အာဏာရှင် သန်းရွှေ (၂)
ကင်ဂျုံအိ က ပထမ၊ သန်းရွှေ က တတိယ (၂)
FP ၏ ၂၀၁၀ခု ဇွန်လထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း ကမ္ဘာတ၀ှန်းမှ အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံး အာဏာရှင် ၂၃ ဦးကို အစီလိုက်သင့် စာရင်းသွင်း ဖေါ်ပြရာတွင် မြောက်ကိုးရီးယား သမ္မတ ကင်ဂျုံအိ၊ ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ရောဘတ်မူဂါဘီတို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ နအဖ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို တတိယ အဆိုးဆုံး အာဏာရှင် အဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
June 23, 2011 at 9:31 PM Reply
သာမန်လူမို.ကိလေသာနဲ.မကင်းနိုင်တော. မိုက်ကယ်အဲရစ် ကို ဘယ်သူမှအတင်းမတိုက်တွန်းပဲ သူ.သဘောနဲ.သူယူခဲ.တာပါ
သာမန်လူမို. အသက် ၄၀ ထိ နိုင်ငံတော်ကို မေ.နေတာပါ
သာမန်လူမို. အနှစ် ၂၀ ကျော်လုပ်သမျှ ဘာမှဖြစ်မလာတာပါ
သာမန်လူမို. အကျယ်ချုပ်က လွတ်တာ ၇ လ ကျော်လည်း ဘာမှ ဖြစ်မလာတာပါ
လူတိုင်းလူတိုင်းက တသက်လုံး နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်လို့ ဘယ်ဘုရားမှ မဟောထားပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့ ယူတာ၊ အသက်လေးဆယ်အထိ နိုင်ငံရေးမလုပ်တာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံကိုမေ့နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး သူ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာတွေကို လေ့လာပါ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလ လုပ်လာတာနဲ့ အကျယ်ချုပ်က ထွက်လာတဲ့ ခုနှစ်လမှာ ဘာမှဖြစ်မလာဆိုတော့ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လဲ ဆိုတာ ဖြေပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘုရား၊ ရဟန္တာ မဟုတ်လို့ ပြီးပြည့်စုံမှုတော့ ရှိချင်မှ ရှိမယ် ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် အက်စစ်တို့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ အာဏာရှင်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ မနာလိုဝန်တို ဖြစ်ရလောက်အောင် ကမ္ဘာကရော မြန်မာကပါ လူတွေက သူ့ကို ဒီလောက်ချစ်ပြီး သူကောင်းပြုနေရတာလဲ။ သူ့ကို သူကောင်းပြုနေတဲ့သူတွေက တယောက်လည်းမဟုတ် နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ် တကမ္ဘာလုံးဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ အသုံးမကျတဲ့ သာမန်အမျိုးသမီးတဦးကို တကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းပြီး ချစ်ခင်လေးစားနေကြ သူကောင်းပြုနေကြတာ တကမ္ဘာလုံးက အရူးတွေ ဖြစ်သွားပြီလား။ Mental Health မှာတော့ အရူးတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရူးတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ ထင်ဘူး သူကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူအကုန်လုံးကို မှားနေတယ်၊ ရူးနေတယ်လို့ပဲ ထင်တတ်ကြတယ် ဆိုတော့ အခုလည်း ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်ရင် ဘယ်သူရူးလဲဆိုတာ သိသာနေတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ် ကမ္ဘာမှာ မှတ်တမ်းဝင်နေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီ ဖျက်ဆီးသူဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုကို အသိအမှတ်မပြုတာက ရူးနေလို့ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်သူမှလည်း နတ်ဘုရားတပါးလို့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သာမန် အညကြတယောက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရနိုင်ဘူး။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၁) says:
June 24, 2011 at 6:57 PM Reply
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၁)
Thursday, 23 June 2011 14:11
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၂) says:
June 24, 2011 at 6:58 PM Reply
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၂)
ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကြာခင်က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ချမှတ်ခဲ့ သည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိစ္စ၊ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ကိစ္စ၊ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် ကိစ္စ၊ လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ရေးနှင့် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာ အနေဖြင့် အချိန်မရွေး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခွင့် ရှိရေး တို့သည် အရေးကြီး ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်မှာ အခုလိုအပ်နေတာက လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးမရှိရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိနိုင် ဘူး၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိရင် နိုင်ငံသားတွေဘ၀ ဘယ်လုံခြုံမလဲ၊ ဒီမိုကရေစီကို သွားဖို့ စစ်မှန်တဲ့ တိုး တက်မှုလည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ အခုထိ အကျဉ်းထောင်ထဲ မှာ ရှိနေတာလဲ။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်မယ်လို့ ပြော နေတဲ့ အခုအစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရှိစရာလိုတော့မှာ လဲ”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဆိုပါ ရုပ်သံမိန့်ခွန်းတွင် ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၃) says:
June 24, 2011 at 6:59 PM Reply
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၃)
ထိုကြားနာပွဲတွင် အမေရိကန်အခြေဆိုက် U.S Campaign for Burma အဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဒင်နှင့် Johns Hopkins Center for Public Health and Human Rights မှ ဒါရိုက်တာ Dr.Chris Beyrer တို့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြကြသည်။
ကြားနာပွဲ၌ Burma နှင့် Myanmar စကားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အပြန်အလှန် မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဗီဒီယိုမှတဆင့် ပြောသောစကားကို နားထောင်ပြီးနောက် ကြားနာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ မစ္စတာ ဒေါ်နယ် မန်ဇူလိုက အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ၏ မြန်မာအစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေး မူဝါဒသည် အမေရိကန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတို့တွင် တိုး တက်မှုမရှိဟု သံသယဖြစ်မိကြောင်း ယင်းကြားနာပွဲ၌ ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၄) says:
June 24, 2011 at 7:00 PM Reply
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ (၄)
မြန်မာ့အရေးကြားနာပွဲသည် ကချင်၊ ရှမ်း စသည့်ပြည်နယ်များတွင် လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော မြန်မာ အစိုးရတပ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တချို့အကြား စစ်ပွဲများဖြစ်နေချိန်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင် နေသည်။
ထိုစစ်ပွဲများကြောင့် ထောင်နှင့်ချီသော ဒုက္ခသည်များသည် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သို့ လည်းကောင်း၊ တချို့မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်သို့ လည်း ကောင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေကြရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တချို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ အခြေအနေများအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း မကြာသေးခင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသား ပြန် လည် သင့်မြတ်ရေးဆီသို့ ဦးတည်ကြိုးစားကြရန်နှင့် စစ်ပွဲများကို ရပ်တန့်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက် အောက်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ရွှေတံဆိပ် ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ဖူးသည်။ ယင်း ဆုသည် အမေရိကန်အရပ်သားများကို ချီးမြှင့်သည့် ဆုများတွင် အမြင့်ဆုံး ဆုတဆု ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါ says:
June 26, 2011 at 1:47 AM Reply
June 26, 2011 at 11:05 AM Reply
((ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါ))
ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရေးသွားသူ သို့ .....
((ရုရှားရောက် ပညာတော်သင် ချာတိတ်ရဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေ)) post
ကို ဖတ်ရန် အကြံ ပေးလိုပါတယ်။
June 26, 2011 at 8:39 PM Reply
အပေါ်က ဘုန်းကျော်ပို့စ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော့်ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ပါ နာမည်နဲ့ လာရေးသူ ကို Advisor ပြောတဲ့ Link အပြင် အပေါ်က ကျွန်မ ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ထဲမှာလည်း အဖြေက ပါပြီးသား ဖြစ်တယ်။ မိမိခေါင်းဆောင် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ မိမိရဲ့ ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူတယောက်နှစ်ယောက်နဲ့ လူတစုက ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုတာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အဖြစ်က ကျဆင်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတယောက်တည်း မထောက်ခံရုံနဲ့ ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ဘူး။ သူ့ကို ပြည်သူလုထု ထောက်ခံတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ၈၈ ကနေ အခုထိ သူအပြင်ထွက်ရင် သူ့ကိုလူတွေက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြ အားပေးကြတာ အသိအသာကြီးကို မမြင်ဘူးဆိုရင် မျက်စိကွယ်နေသူ ဦးနှောက်ချွတ်ယွင်းနေသူတွေပဲ ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ လူအများစု ထောက်ခံနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ကို မိမိမထောက်ခံတာနဲ့ပဲ ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး။